Pet Care Factory |China Pet Care Manufacturers, mpamatsy
Fitaovana ho an'ny biby fiompy tsy misy rantsantanana silikôma satroka fanasan-damba fanasan-damba fanasan-damba fanalana volo borosy fonon-tanana ho an'ny biby fiompy.
Fifandirana manohitra (Anti-Skid Bump):Ny tampony anatiny dia tsy mitongilana, ary ny fonon-tanana shampoo fandroana alika dia mifanandrify amin'ny elasticité tsara, izay mety hahatonga ny fonon-tanana mifanaraka tsara amin'ny tanana ary tsy mora latsaka.Tsy ilaina ny manitsy matetika ny fonon-tanana mandritra ny fandroana.
Fampiasana maro:Mety amin'ny karazana biby fiompy volom-biby, toy ny saka, alika ary bitro.Ankoatra ny biby fiompy dia azo ampiasaina hanadiovana ny kojakoja, fanaka, fiara, akanjo ary zavatra hafa ihany koa ity fonon-tanana mpanandro fandroana ity.
Famolavolana vaovao fitaovana manohitra ny fivontosana Silicone Fingotra Pet Bite Suit Anti Bark Adjustable Dog Mouth Mask
Ny tady dia elastika, malefaka, malefaka ary azo amboarina malalaka.Raha manao an'io ianao dia hahatsapa ho mahazo aina ny biby fiompinao.Rehefa mivoaka mitafy ity vokatra ity ny alikanao, dia afaka manodina ny lohany tsara tsy misy fanerena.
Raha manana ahiahy na fanontaniana ianao mandritra ny fividianana, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny mailaka.Ny fahafaham-ponao no adidinay lehibe indrindra.
Pet Care Accessories Reusable biby manala volo borosy douche tohotra Pet fandroana borosy
MASSAGE NY BIBILANANAO: Manomboka miala sasatra ny biby fiompy eo ambanin'ny fihetsiky ny borosy.Ampiasao ity borosy douche ho an'ny biby fiompy ity miaraka amin'ny fandroana ho an'ny biby fiompy mety dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny biby fiompinao. Effet roa ny fanorana ny hoditra sady manentana ny kapilara izay manatsara ny hoditra sy ny palitao.
BEST BRUSH BATH: Natao ho an'ny volo lava sy fohy, Ny vokatry ny fanadiovana sy fanorana roa dia mahatonga ny traikefa mandro ho an'ny alikantsika hiandrandra hatrany hatrany.